DAREEMAHA BISADAHA: HALIS U AH DADKA AMA AAN AHAYN, IYO SIDOO KALE DHAMMAANBA KU SAABSAN BOODADA XAYAWAANKA EE AADANAHA - GURI, GURI
Ugu Weyn Ee Guri, guri
Laga soo bilaabo xayawaan adiga ama xayawaan caruur ah! Sidee boodada ugu dillaacsan bisadaha loogu talagalay dadka?
Waxaad ku talaali kartaa dhammaan cudurada. Astronauts waxay ku nooshahay sanado badan saldhigga orbital. Bini'aadanku maahan maanta - berri waxay la qabsan doonaan kansarka iyo AIDS. Oo waxaannu ka cabsannay boodh!
Tani ma aha mid la yaab leh. Waxay ku nooshahay 55 milyan oo sano ka hor.. Xaaladaha dabiiciga ah ee ku dhintay mammoths ma aysan keenin waxyeellada ugu yar ee bukaan-socodka.
Iyo ilaa inta ay noqon karto khatarta dadka?
Bloodsucking, cayayaanka parasitic. Aad u adag. Marka heerkulkiisu hooseeyo hibernates muddo dheer.
Marka loo eego xaaladaha wanaagsan, jiilka ayaa leh waqti uu ku koro oo uu galo muddada baaluqnimada si dhakhso ah, 10-14 maalmood gudahood.
Caawin! Sababtoo ah qaab dhismeedka jirkiisa (flattened), awood u leh inay ku boodaan xawaaraha shidaalka iyo inay noqdaan kuwo aan qabyo ahayn, oo ku dhowaad aan la dabooli karin.
Oo sidaas daraaddeed aynu u ogaanno
Miisaanku wuxuu u cararaa. Cayayaanka yar yar. Cabbiryada laga bilaabo 0.5 mm illaa 3 mm. Ma duuli karto, maadaama aysan jirin baalal.
Laakiin waxaa jira lugo aad u xoog badan, taas oo ay iyada oo kale ka boodi karto shay. Qof kastaa leeyahay milkiilaha, xaaladdan kallu, marnaba isbeddelo milkiilaha iyo nolosheeda oo dhan inta uu nool yahay oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, tani kama horjoogsatid in ay "u diyaarsato" dadka kale. Miisaanka Cat waxay leeyihiin midab madow. Taurus wuxuu u eg yahay sidii loo kala soocay labada dhinac. Qolku waa mid aad u adag.
Eeyaha qabowga. Waxay yareyneysaa cabirka, illaa 5 mm. Qalabka Mouth qalabka dillaacsan iyo jaqaan. Waxay leedahay 6 lugood. Qolka jidhka Nafaqo-xumada ka sii dartay. Laakiin si ay u burburiso waxay rabtaa inay sameeyso dadaal badan.
Haddii kale, waxay isku midka yihiin.
Waa maxay boodada halista ah ee xayawaanka raba
Cayayaanka aad u xun. Waxay ku dhibayaan nabadda xayawaankeena. Qaniinkoodu wuxuu ka xanaajiyaa maqaarka iyo waxay keeni kartaa xasaasiyad xasaasiyadeed eeyaha iyo bisadaha. Iyadoo timo ballaaran oo timo ay bilaabato inay hoos u dhacdo, sii xumaato caafimaadka guud, waxay daciifisaa difaac. Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo sidayaal ah oo ah xakameyn faafa iyo cudurrada xoolaha.
Sidee boodada u soo gashay guriga?
Haddii aad hayso xayawaanka, su'aashu way baaba'aysaa. Marka loo eego cinwaanka waxay yimaadaan guryahayaga oo leh bisadaha ama eyda.
Haddii aadan haysan xayawaan guriadiga ama martidaada waxay keeni kartaa dirxiga ama ukunta kabaha. Haddii asxaabtaada ay hayaan xayawaanka, boodada ayaa kaa boodi karta xayawaankan waxayna kuugu imaan kartaa si ammaan ah gurigaaga. Waxaa jira siyaabo badan.
Maxay yihiin cayayaankaan khatarta u ah bani-aadamka?
Su'aasha weligeed ah ee welwelka badan - Miyuu khatar u yahay bini-aadanka ama ma'aha? Ma waxay ku noolaan karaan jirka aadanaha? Kama degi karno! Ma ahan bisad ama eeyga. Laakiin qaniinyo - Haa! Labadaas iyo kuwa kale.
jidhka bani-aadmigu aad ayuu uga duwan yahay jirka xayawaanka. Ma haysanno jaakad ay tahay lagama maarmaanka u ah jiritaanka boodada. Ma laha meel ay ku qariyaan;
xaaladaha bulsho ee nolosha casriga ah, shaambada joogtada ah, duufaannada maalinlaha ahi maaha kuwo ku lug leh noolasha bukaan-yari (waxay ka baqayaan biyo) jidhka bini'aadamka.
Laakiin xitaa haddii boodbadu aaney ku degi karin jirkeena, way qani kartaa. Qaniinyada waa xanuun, maqaarka ka dib qaniinyada ayaa la xoqay. Haddii ay jiraan dad badan, qaniinyada waxay sababi karaan falgal xasaasiyad. Haddii eeygaaga eeyahaagu leeyihiin waqti ay ku qaniinaan xayawaan kale, eey xanuunsan ama jiir, ka dibna way ku qaniinaan, waxay noqon kartaa foorarsi xanuun ama dulin.
Tani waa qof caan ah. Thanks to her, ma ahan boqortooyo ka soo baxday cudurka, iyo xataa Lefty ammaanay iyada oo ay awoodaan inay kabo. Si kastaba ha ahaatee Ha siin cayayaanka qiimaha badan. Si aad iyaga ula qabsato guriga ma aha mid aad u adag, laakiin waxaa fiican inaadan u ogolaanin noloshaada.
Noocyada tubta oo qudha
Cryptanthus iyo mabaadii'da daryeelka guriga isaga oo jooga
Sida loo abuuro iyo u koraan warshad Spire Gray Grefshaym
Chickpeas: imisa kaloori, vitamiin waxaa ku jira, maxaa faa'iido leh, waxa la cuno
Sida humus loo sameeyay, sifooyinka wanaagsan ee humus ee ciidda
Ku dhalida by gooyn
Beeraha iyo daryeelka xiga
Orodka roodhida ah
Bannaanka beerashada xilliga qaboobaha
Daawada caafimaadka xoolaha, si loola dagaallamo nematodes, taas oo si joogto ah u xoqin mooska caloosha ee xayawaanka iyo xubnaha neefta, isticmaal aalad loo yaqaan "Levamisole". Maqaalkeena waxaad ka baran doontaa daroogada, tilmaamaheeda isticmaalka, ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato sida loo caawiyo xayawaanka dagaalka ka dhanka ah dulinka, iyada oo aan waxyeello caafimaad u keenin. Read More
Koraaya yaanyada cherry: sida loo kobciyo yaanyada saxda ah ee windowsill
Guryaha dawooyinka iyo ka hortaga amaranth
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Guri, guri 2020